Fomba 12 hifandraisana indray amin'ny vadinao rehefa mahatsapa fa tsy mifandray ianao - Fifandraisana
Fomba 12 hifandraisana indray amin'ny vadinao rehefa mahatsapa fa tsy mifandray ianao
Mahatsiaro ho lavitra ny vadinao tato ho ato?
Angamba tsy afaka miala amin'ny ady hevitra ianao na mahatsapa fa nihena ny tantaram-pitiavana rehefa nandeha ny fotoana.
Saingy amin'ny fihetsika mety sy fiovana kely vitsivitsy dia afaka miverina amin'ny teny tsara kokoa ianao.
Ny fifandraisana dia mila ezaka mba hiroborobo. Raha vantany vao manambady ianao, dia mora ny manelingelina ny zavatra hafa rehetra nataonao teo amin'ny fiainana ary atsaharo ny fanomezana ny fiheverana mendrika azy.
Raha mahatsiaro ho tafasaraka amin'ny vadinao ianao dia jereo ity ho fanairana iray hanombohana ny laharam-pahamehana amin'ny tsirairay.
ny fomba fanamboarana aorian'ny fifamaliana
Ny fahatsapana fa toa mila fanampiana kely ianao sy ny vadinao mba hifandraisana indray? Vakio hatrany raha hijery torohevitra ambony sasany momba ny fomba hanombohana:
1. Miresaka amin'izy ireo.
Mila roa ianareo hamelona indray ny fifandraisana, ka raha mahatsiaro ho lavitra ny vadinao ianareo, misokàna miaraka amin'izy ireo ary miresaka momba ny fananganana ny fifandraisanareo hiverina amin'ny toerana tsara.
Eritrereto raha mahatsapa ho tafasaraka amin'izy ireo ianao noho ny zavatra nataon'izy ireo mba hahasosotra anao. Raha misy olana tsy voavaha eo anelanelanao dia azonao atao ny manakatona ny tenanao amin'izy ireo tsy amin'antony.
Raha avela ianao dia ho simba ny olana amin'ny fifandraisanao ary hampisaraka anao ny olana. Ny firesahana amin'izy ireo momba ny olana dia hanampy anao hahita ny fanidiana ilainao amin'izany ary hahafahanao miara-mandroso.
Raha mila bebe kokoa amin'ny vadinao ianao amin'ny resaka fifantohana sy fitiavana , ento miakatra amin-dry zareo amin'ny fomba manorina izy ity, manomeza ohatra ny fomba hanomezan'izy ireo anao izay ilainao. Tsy ho fantatr'izy ireo fa tsy manao zavatra ampy izy ireo raha tsy lazainao azy ireo.
Misokatra amin'ny fahatsapanao ary tsarovy fa, na dia manambady aza ianao, tsy midika izany fa afaka mamaky ny sainao ny olon-tianao. Mila ny fanohanan'izy ireo ianao mba hanovana fiovana tsara eo amin'ny fanambadianao, ka atombohy amin'ny firesahana amin'izy ireo ary jereo ny fivoaran'ny raharaha.
2. Mahazoa vatana.
Adinontsika ny fiantraikan'ny fikasihan-tanana antsika. Ny oroka maharitra, ny famihinana tery, na ny borosin-tànana aza dia afaka mamerina tampoka ny simia eo aminao.
Raha mahatsapa ianao fa toa very ny bara, dia miezaha hamorona fifandraisana ara-batana bebe kokoa amin'ny vadinao.
Zavatra kely toy ny mikasika ny sandrin'izy ireo rehefa miresaka aminy ianao na mitazona ny tanany indray rehefa mandeha ianao , mety ho ampy hampatsiahivana anao roa amin'ny fifamatorana manokana ifandraisanareo.
Ny firaiketam-po dia ampahany lehibe amin'ny fifandraisana ary azo esorina noho ny havizanana sy ny fandaharam-potoana be atao. Ny firaisana ara-nofo dia zavatra manokana ifampizaranao ihany, ka ampiasao ho fitaovana hamerenana ilay fifandraisana tadiavinao.
Ny fampatsiahivana ny vadinao amin'ny fahatsapana fa voakitika sy nampahery azy ireo hanao toy izany dia mety ho izany rehetra izany mba hahatonga anao hahatsapa ho mifandray indray sy haka indray ny majika tsy nananan'ny fiarahanareo.
3. Raiso ny làlan'ny fahatsiarovana.
Mandania fotoana kely hamakivakiana sary taloha na andramo mamorona iray amin'ireo daty tianao indrindra.
Ny fampatsiahivana ny fotoana mahafinaritra miaraka dia mety ho fanatanjahan-tena mahafinaritra, mamerina ireo fahatsiarovana mahafinaritra ireo ary mampahatsiahy anao ny traikefa nizara nahafinaritra nanananao mpivady.
Ashley massaro antony nahafaty
Raha mahatsapa ianao fa toa nihataka lavitra satria nahatratra ny zavatra rehetra ivelan'ny fanambadianao, ny famerenana ireo fahatsiarovana mahafaly sasany dia afaka mampatsiahy anao ny olona izay nahavita ny tsara indrindra vitanao.
Ny fahafantarana ny fiovanao rehefa nandeha ny fotoana dia mety ho ny fahatsapana ilainao hamerenanao indray izay zava-dehibe aminao amin'ny fiainana ary hanomboka hametraka ezaka bebe kokoa ao amin'ny fanambadianao.
Antenaina fa ny fahatsiarovan-tena amin'ny fotoana mahafinaritra dia hamporisika anao roa hanomboka handamina fitsangatsanganana sy daty hafa hahafahanao mamorona fahatsiarovana vaovao sy manararaotra tsara ny fifandraisanareo indray.
4. Manomboha mampiaraka indray.
Ny tiako holazaina dia…
Ny fanombohan'ny fifandraisana vaovao dia manaitaitra foana. Mifanao ezaka ianareo ary samy maka fotoana hiakanjoana sy hisafidy toerana tsara haleha.
Raha vantany vao manjary mahazo aina sy mifanambady isika dia afaka mijanona tsy manao laharam-pahamehana amin'ny alin'ny daty ary miditra amin'ny fahazaran'ireo PJ sy fitaterana.
Mahafinaritra fa tonga amin'ny fotoana iray ianao dia faly tanteraka miaraka amin'ny tenanao ary tsy mahatsapa fa mila manaitra. Saingy amin'ny alàlan'ny fandaharam-potoana amin'ny alin'ny daty mahazatra dia manokana fotoana ianao mba hifanaovan-tsafidy sy hanehoana fa miahy ny hijery sy hahatsapa ho tsara amin'ny vadinao ianao.
Ny olona rehetra dia manintona kokoa rehefa mijery sy mahatsapa ny tsara indrindra vitany izy ireo, koa avadiho ny akanjo ho an'ny akanjo mahafinaritra ary mandany fotoana voatokana hanaovana zavatra mahafinaritra miaraka.
Tsy mila mandeha any amin'ny trano fisakafoanana mahafinaritra foana ianao, ny zava-dehibe dia ny fandaniana fotoana mifantoka amin'ny tsirairay fa tsy misy fanelingelenana ary manana ny fotoana ilaina indrindra hifandraisana indray ho mpivady.
5. Manaova lisitra siny.
Rehefa vao mifandray amina olona iray ianao dia manana ireo fanantenana sy nofinofinao ireo ny zavatra hataonao miaraka sy ny zavatra rehetra ho vitanao. Izy ireo dia mety ho nofinofy lehibe toy ny fividianana trano miaraka, na drafitra kely kokoa toy ny fialantsasatra.
Rehefa mandeha ny fotoana ao amin'ny fanambadiana ary nizara traikefa bebe kokoa ianao ary nahatratra ny ankamaroan'ny tanjonao, dia najanonao ny drafitra ny zavatra hiasa ho mpivady. Manomboka mahatsapa ho malemy ianao amin'ny fiarahanareo, tsy misy antenaina intsony. Mety hahatonga anao hieritreritra fa tsy nahaliana anao intsony.
Ny mipetraka eo am-panomanana lisitry ny siny miaraka amin'ny olon-tianao dia fomba mora hamerenana amin'ny laoniny ny fientanam-po amin'ny andro voalohany niarahanareo.
Andramo lisitra ireo zavatra, lehibe na kely, izay samy tianareo hatao, fa alao antoka fa zavatra azonareo atao miaraka. Izy io dia afaka manome anao fahitana vaovao momba ny mpiara-miasa aminao sy ny tenanao rehefa mitanisa ireo zava-baovao tianao hararaotina miaraka ianao.
Omeo fe-potoana azo antenaina ny tenanareo ary avereno jerena tsy tapaka ny lisitra hanamarihana ireo hetsika vitanao.
Tsy vitan'ny hoe hanana zavatra antenaina ho mpivady ianao, miaraka manao fahatsiarovana vaovao, fa hanana fahatsapana fahombiazana iraisana amin'ny famitana ny lisitrao.
Manantena aho fa hahazo famporisihana ianao hanohy hanery ny fetran'ny zavatra niainanao ho mpivady, hisorohana ny fiainana tsy hankaleo.
6. Mifandraisa ny sainao manontolo.
Samy meloka tamin'io daholo isika… mandany fotoana miaraka amin'ny vadinao ianareo, fa ianareo roa kosa mipetraka eo amin'ny finday, mijery ny tambajotra sosialy na mamaly namana.
Fahazarana mampidi-doza ny fanenjehana anao satria na dia mieritreritra aza ianao fa mandany fotoana miaraka dia tsy dia mifanaja tanteraka.
Ny tsy firaharahiana ireo fanelingelenana hafa dia mihamafy kokoa raha ampidirinao ao anaty fifangaroana ny asa na ny ankizy. Rehefa misy zavatra hafa tokony hatao foana, ny mifantoka amin'ny vadinao dia mijanona ho laharam-pahamehana.
Satria efa nahazatra ny namanao foana ianao, tsy midika izany fa tsy mendrika ny hanana ny sainao manontolo izy ireo rehefa mahazo ny vintana. Famantarana ny fifanajana ny tsirairay hifantoka tanteraka amin'izay lazainao sy ataonao miaraka.
lex luger tsy haiko
Hamarino tsara fa, mandritra ny alina, farafaharatsiny mba hiezahanao hametraka ny telefaoninao ary handoko fotoana kely fotsiny ho anao roa. Samy hankasitraka ny fahalianan-tsaina ianao ary hanome fotoana anao hifandray tsara sy hizara fotoana sarobidy.
7. Mandany fotoana miaraka.
Na dia mety hilaza aza isika fa niara-nandany takariva iray, ny antsasany mijery savony amin'ny fahitalavitra rehefa manamarina ireo telefaoninay sy mimonomonona ‘andraso, iza no nanao inona?’ Isaky ny mifampiresaka matetika izahay, dia tsy manisa.
Tsy hoe satria mifanila amin'ny efitrano iray ianao, dia tsy midika hoe miaraka mandany fotoana miaraka amin'ny kalitao ianao.
Tsy midika koa izany fa ny fijerena fahitalavitra miaraka dia tsy mety misy dikany. Momba ny fomba hanatonana hetsika iray na raha ataonao mavitrika na mandalo.
Raha te hijery zavatra iray ianao, mifidiana sarimihetsika miaraka, avoahy ny sakaizanao ankafizinao hizara, apetraho ny telefaoninao ary omeo ny sainao toa ny hoe eo amin'ny sinema amin'ny daty iray ianao. Raha mahandro sakafo hariva ianao dia ataovy ho fanaovan-javatra miaraka, mifampiresaka sy mifampiresaka.
Ny fanatonana tanjona amin'ny hetsika miaraka amin'ny tanjona fa tsy ny fahazarana dia iray amin'ireo fomba tsotra indrindra hahitana fotoana ahafahana mampifandray kely isan'andro.
Ny fanaovana safidy dia ny hahafantatra ny olon-tianao sy hanome azy ireo ny sainao fa tsy ho eo amin'ny toerana iray ihany.
Tsy mety ho daty mahafinaritra sy tsy ampoizina manaitaitra foana izany, fa ny fanovana ny fihetsikao amin'ny fomba andanianao fotoana iarahana dia hanomboka hanome lanja kokoa azy roa kokoa.
8. Lazao azy ireo ny zavatra tianao momba azy ireo.
Tianay rehetra ny mandre zavatra tsara nilaza momba antsika indray mandeha. Rehefa mifankahalala miaraka ianareo dia voajanahary ny mifampiarahaba, fa ity dia zavatra mety hianjera amin'ny fifandraisana arakaraka ny faharetany.
Ny fiezahana bebe kokoa handoka am-bava ny vadinao, ary indrindra indrindra, lazao azy ireo ny zavatra ankafizinao momba azy ireo, dia mety ho fomba iray hamporisika ny roa hifandray indray.
Tsy hoe hidera ny vadinao fotsiny ianao, fa ny filazanao ireo zavatra ankasitrahanao momba azy ireo dia fampahatsiahivana anao momba ny zavatra rehetra ankasitrahanao azy ireo.
Mety tsy ho ela dia ho tsapanao fa manome lanja azy ireo ianao, ary manome toky azy ireo koa. Arakaraky ny andrenesany fankasitrahana avy aminao no mety hameren'izy ireo azy ireo indray, hamerenany ny sasany amin'ireo romantsy romantika very anao ireo.
9. Diniho ny fiainana tsy misy azy ireo.
Tsy eritreritra mahafinaritra ny manana, fa raha tena sahirana ianao mahita izany fifandraisana amin'ny vadinao izany dia mety mendrika ny hisaintsaina ny fomba fiainana hafa tsy hisy azy ireo.
Voalaza fa tsy fantatsika izay ananantsika raha tsy efa lasa izy io, ary tsy mahazatra ny meloka noho ny fifampitondrana ho azy rehefa mandeha ny fanambadianareo.
Ny fampiasana fotoana vitsivitsy hieritreretana marina hoe hanao ahoana ny fiainana raha tsy misy ny vadinao dia tsy fanatanjahan-tena mahafinaritra, fa ny mahatsapa ny fiantraikan'izy ireo aminao isan'andro ary inona no dikan'ny tsy fananana azy ireo any intsony mety ho fahatairana amin'ny rafitrao ilainao manomboka manomboka bebe kokoa amin'ny fifandraisanao manokana.
Ny fananana toerana malalaka ary tsy mifanampy mihitsy dia tranga samy hafa tanteraka. Mahasalama ny manana fotoana ho anao amin'ny fifandraisana, fa ny tsy fanananao ny vadinao mihitsy ary ny fandinihana ny tena fahatsapana izany dia mety hahatonga anao hankasitraka izay anananao kely kokoa.
Atombohy ny fanararaotana indrindra ireo fotoana iarahanareo miaraka sy fifankatiavana mavitrika. Amin'ny firotsahana bebe kokoa amin'ny fifandraisanao dia ho hitanao fa vao manomboka miala amin'izany ianao.
10. Ahintsano ny fanaonao.
Aza atao tafiditra ao anaty zotram-pahazarana mitovy amin'izany ary ahintsano zavatra tsy ampoizina ho an'ny vadinao.
Rehefa rut ianao, dia mety ho variana loatra amin'ny fomba mahazatra isan'andro ary manomboka miala amin'ny fotoana laninao amin'ny vadinao amin'ny alàlan'ny monotony daholo.
Ny fanovana ny fanazaran-tena ataonao na ny fikolokoloana tsy ampoizina tampoka dia hampihemotra anao roa avy eo ary tsy hifantoka indray ny sainao.
Tsy mila zavatra lehibe hanovana zavatra ianao, ny fahasamihafana ataonao aorian'ny vanim-potoana miraikitra amin'ny fanazaran-tena isan'andro dia hamelombelona anao roa ary hanomboka hanjaka ny fifandraisana eo aminao.
ahoana ny mitomany rehefa tsy afaka
Mety ny fanaovana ny iray amin'ireo adidiny ho azy ireo, ny gaga amin'izy ireo amin'ny sakafo ankafiziny, na ny fikasana hanao fitsangatsanganana amin'ny alina. Mifampiambina amin'ny rantsan-tongotrao miaraka amin'ny hevitra sy fihetsika mahafinaritra ary aza hadalana resin'ny famerimberenana.
11. Miaraha manao asa an-tsitrapo.
Tsy io ihany no mahatafiditra anao roa manokana fotoana hanaovana zavatra misy dikany miaraka, fa hanampy ny hafa koa ianao.
Tsy misy toa ny milatsaka an-tsitrapo hamerina ny fiainana ho amin'ny fomba fijery rehefa mahatsapa very kely ianao. Ny fanaovana an'ity hetsika ataonao miaraka amin'ny vadinao ity dia afaka manampy anao hifandray amin'ny soa iraisana ary hahita ny tsara indrindra indray.
Mety ho karazana volontaire rehetra, na fiaraha-miasa amin'ny olona, ​​ny fiarahamoninao, na ny fiantrana.
Ny firaisana miaraka amin'ny antony tsara dia hahatonga anao ho ekipa iray indray ary afaka manampy anao hankasitraka izay anananao amin'ny fiainanao manokana sy ny tsirairay.
12. Miaraha manangana zavatra.
Na lehibe na kely, tsy maninona izany, fa ara-dalàna tsy mifidy zavatra izay hametraka tsindry sy adin-tsaina be loatra amin'ny fifandraisanareo.
Izy io dia mety ho tsotra toy ny kitambo asa-tanana na tetik'asa DIY izay tianao hitodihana any amin'ny tranonao. Ny ampahany manan-danja amin'izany dia ny hahazoana antoka fa zavatra samy afaka mandray anjara sy miara-manao izany ianareo roa.
Ny fananganana zavatra miaraka dia midika fa tsy maintsy manamboatra fotoana ianao hifantohana amin'ny tetik'asa iraisana. Hanana fotoana hiresahana sy hifandraisana indray ianao nefa tsy misy fanelingelenana, rehefa apetrakao amin'ny tanjonao iraisana ny herinao.
Ny fahombiazan'ny tetikasa dia miankina aminao roa mihaino sy mifanerasera amin'ny fomba tsara sy mamporisika. Mety hanomboka hidera voajanahary, hifanampy ary hifanampy ianao, miasa daholo ny hampifandray anao indray ny fifandraisanao ary hampahatsiahy anao fa tena miahy an'ity olona ity ianao.
Raha vantany vao vita ny tetik'asa dia ho afa-po ianao amin'ny fahafantarana fa zavatra niaraka niarahanao izany ary ho fampatsiahivana ny ekipa lehibe anananao.
Tsy hiroborobo ny fanambadiana raha tsy mirona. Eo afovoan'ny fiainana niara-nanorina anao, ny asa, ny trano, ny fianakaviana, dia fifandraisana misy olona roa izay mbola mendrika ny hojerena.
Ny fahalianantsika samy izy dia hiova ary hivoatra rehefa mandeha ny fotoana. Samy meloka daholo isika satria tsy nataontsika loha laharana ny fifandraisanay ary kosa nanome ny sainay be loatra amin'ny zavatra hafa rehetra manodidina antsika izahay.
Raha te-hamerina ny sasany amin'ny simia sy ny fifandraisanao tamin'ny fiantombohan'ny fifandraisanao ianao, dia nomenao saina toy ny taloha ihany izany. Mitadiava zava-baovao hifankafantatra, mifampiarahaba sy mifampididinika na firy na firy taona ianareo no niaraka.
Ny ezaka kely dia mandeha lavitra amin'ny fitazonana izany tara-pahavelomana eo aminao izany. Matokia ny fifandraisanao tamin'ity olona ity izay matanjaka tsara nahatonga anao hisafidy ny handany ny fiainanao miaraka amin'izy ireo. Io fifandraisana misy eo aminao io dia eo ihany, ary amin'ny fijerena bebe kokoa dia afaka mivoatra izy io.
Mbola tsy azonao antoka ve izay hatao mba hiverenan'ny fifandraisana amin'ny vadinao? Miresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hahalala zavatra. Tsotra.
Ahoana ny fomba hamerenana ny tsimoka amin'ny fifandraisanareo: 10 tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
Fomba 16 hamerenana amin'ny laoniny ny fanambadianareo
Inona no hatao raha tsy sambatra ianao amin'ny fifandraisanao nefa tianao izy / izy
zavatra kely tantaram-pitiavana hatao amin'ny sakaizanao
ny fomba hahitana zava-misy mahaliana momba ny tenanao
raha bandy miantso anao mahafatifaty
misintona ve ny lehilahy rehefa raiki-pitia
inona no zavatra tokony hatao, rehefa ny noloahany
ahoana no ahafantarana raha misy vehivavy tanora tia anao